शेयर बजार - यथार्थ खबर
२६ भदौ २०७८, शनिवार
नेप्से भनेको के हो ? नेप्से परिसूचक कसरी निर्धारण गरिन्छ ?&nbsp;&nbsp;सेन्सेटिभ परिसूचक भनेको के हो ? शेयर बजारको व्यवस्थापन गर्ने नेपालको एकमात्र संस्था नेपाल&nbsp;स्टक एक्सचेञ्जको छोटकरी रूप नै नेप्से हो । शेयर बजारको पूँजीकरणको मापन गर्नका निम्ति नेप्से परिसूचक (इण्डेक्स) गणना गरिन्छ । यसले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको पूँजीकरण घटेको वा बढेको सङ्केत गर्दछ । कुनै दिनको अन्तिम...
महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले माघ २८ गतेदेखि सर्बसाधारणको लागि साधारण शेयर (आईपीओ) बिक्रि खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ लाख कित्ता शेयर विक्री गर्न लागेको हो । संस्थाको जारी पुँजी १० लाखको ४० प्रतिशत हुन आउने ४ करोड रकम बराबरको जारी गर्न लागिएको ४ लाख कित्ता शेयर मध्ये जारी पुँजीको ०.५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरु तथा सर्वसाधरणलाई...
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आज जनतालाई आफ्नो प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) वितरण गरेको छ। बैंकले 8 अर्बको आईपीओको 80,000,000 युनिट जारी गरेको थियो जुन अहिलेसम्मको नेपाली बजारमा जारी गरिएको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हो। सबै आवेदकहरु प्रत्येक कम्तिमा 50 शेयर को शेयर मिल्यो। बैंकले आईपीओको लागि 6,276 अमान्य अनुप्रयोगहरू बाहेक 147,580 आवेदन प्राप्त गरेको थियो।
बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीले नुवाकोटमा निर्माणाधीन ५ मेगावाटको तल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर निस्कासनको तयारी गरेको छ । स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि १२ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गर्न सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । एक सय दरका १२ करोड कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमतिका लागि कम्पनीले नेपाल ध...
२४ पुष २०७७, शुक्रवार
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ खुला भएको छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि १५ करोड ३४ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९ सय १० कित्ता सेयरको बिक्री आजबाट खुला भएको हो । पहिलो चरण अन्तर्गत चन्द्रागिरीले यसअघि स्थानीयवासीका लागि चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको छ । यो र्आपीओको आवेदन मंगलबार बन्द हुनेछ ।